Thursday October 10, 2019 - 20:29:36 in Wararka by Super Admin
Ururka argagixisadda Al-Shabaab ayaa Xoghayaha Lojiistikadda dalalka Geeska Afrika u magacaabay Abdihakim Hassan Iidow oo loo yaqaan Xiirane sida ay ku xog warameen Saraakiil ka tirsan gollaha fulinta kooxdaas.
Abdihakim Hassan Idow oo la rumeeysan yahay inuu mudo dheer ka tirsanaay Saraakiisha sare ee Al-Shabaab ayaa ka shaqeeyn jiray qeybta suuq geeynta ee Hormuud Telecom laakiin seddexdii sano ee ugu dambeeysay waxaa loo wareejiyay Xarunta weyn ee SALAAM AFRICAN BANK oo ku yaal Jamhuuriyadda Jibouti.
Abdihakim Hassan oo ku taqasusay Public relation and Marketing ayaa Salaam African Bank u qaabilsanaay dhinaca kala gudbinta lacagta loo yaqaan Black Market Money laakiin inta la xaqiijiyay wuxuu Mr Abdihakim heeystaa seddex Passport oo laga leeyahay dalalka Ethiopia, Jibouti iyo Somalia ,halka uu dhawaana qaatay USA Green Card kadib markii Xaaskiisa u dacwootay.
Ugu yaraan 12 jeer ayuu Abdihakim Nairobi ku tegay Ethiopian Passport sidoo kalena tira ka 21 jeer ayuu ku tegay Kenya Jibouti Passport.
Safarkiisii ugu dambeeyay 21 September 2019 ayuu Abdihakim uga duulay Jomma Kenyatta Airport Passport-ka laga siiyay Jamhuuriyadda Jibouti.
Abdihakim Hassan idow oo la socday Daallo Airlines ayaa Muqdisho tegay , waxeyna ila wareedyo muhiima sheegeen in magacaabistiisu quseeysay safarkiisa ugu dambeeyay.
Madaxweynaha Jibouti ayaa la rumeeysan yahay inuu Salaam African Bank ku shubto lacagaha uu ka dhaco dalkiisa ,sida lacagaha uu ka helo Dowladaha uu Ciidankooda talisyadda Melleteri ka siiyay Jibouti sida Mareykanka iyo China.
Abdihakim Hassan Iidow oo u dhashay Hawiye ,Duduble gaar ahaan beesha Mohamed Camal, Reer Deexey wuxuu noqonayaa masuulkii seddexaad ee kooxda Al-Shabaab xil u magacaawdo kana tirsan Shirkadda Hormuud Telecom iyo Salaam Bank.
Sikastaba ha ahaatee, Shirkadda Hormuud Telecom oo ah shirkadii Al-Barakaat Telecom ee loo xayiray arrimaha argagixiso ayaa lagu eedeeyaa iney mar walba garab taagan tahay oo maalgelin dhaqaale siiso Argagixisadda Al-Shabaab.